April | 2012 | San Oo Aung's Weblog
ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ တိုက်ခိုက်နေတာတွေ ဖန်တီးနေတာတွေကို သတိမူကြပါ။
Posted on April 26, 2012 by tunaung
from:Nik Nayman‘s facebook
“လူတစ်ယောက်အနေနှင့် မိမိတစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို လေးစားကြည်ညိုယုံမျှနှင့် မပြီး။ အခြားတစ်ပါးသောသူများ၏ အတွေးအခေါ်အယူဆများကိုလည်း ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှု မရှိပဲ ဝေဖန်နှိပ်နှယ်ခြင်း မပြုသင့်” ။ (အသောကကျောက်စာ) ။ Continue reading →
Posted on April 18, 2012 by tunaung
YANGON | Wed Apr 18, 2012 7:31am EDT
YANGON (Reuters) – Nobel Peace Prize laureate and newly elected lawmaker Aung San Suu Kyi will travel outside Myanmar for the first time in 24 years after accepting invitations to visit Norway and Britain in June, her party said on Wednesday.
RFA:ဘာသာရေး အငြင်းပွားမှုတွေ ရှောင်ရှားကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
Posted on April 16, 2012 by tunaung
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အခုလိုကာလမျိုးမှာ ဘာသာရေးအရ အငြင်းပွားမှု၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကို ရှောင်ရှားကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ကာလမှာ ပြည်သူလူထုကို မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
Posted on April 15, 2012 by tunaung
Read more: http://globalspin.blogs.time.com/2012/04/13/time-interviews-french-presidential-front-runner-francois-hollande/#ixzz1s6Pgmz63
Complaint letter to the President U Thein Sein about damaging of Masjids by local authorities, USDP and NLD members
Lin Win Thu wrote on his FB wall:လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်အရ ဘာသာမတူပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ဒါလေးတော့ဖတ်ပေးပါ —-
မြစ်ကြီးနား ၊ မိုးညှင်းခရိုင် ၊ ဖားကန့်မြို့နယ် (ယခင်အခေါ်ဆိုင်းတောင်)ဆိတ်မူကျေးရွာ တွင်ဖြစ်သော အဖြစ်အပျက်မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်ထရံကာသွပ်မိုး ဖြင့်အစ္စလာမ်ဝတ်ပြုဆောင် တည်ဆောက်ဝတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၁၈နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်၍ သစ်များထရံများပျက်စီးသဖြင့်ပြုပြင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ ပေ၃၀-၄၀ ၀န်းကျင်အဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်ပိုင်းတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်…းဆွမ်းစားဆောင် ကျပ်သိန်း၂၀၀၀တန်ကိုခွင့်ပြုမိန့်မပါဘဲတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
An image makeover for Myanmar Inc
Posted on April 13, 2012 by tunaung
YANGON, April 13 — He’s the flashiest tycoon in one of Asia’s poorest cities, withacanary-yellow Lamborghini parked outside his neoclassical mansion.
Tay Za is also one of the most vilified associates of Myanmar’s former junta. The US Treasury has branded hima“notorious henchman and arms dealer,” slapping him with sanctions that froze his assets and blocked his jet-setting family from cities across the globe.
Reuters:U.S. moves to ease Burma sanctions after reforms
Posted on April 5, 2012 by tunaung
(Reuters) – The United States said on Wednesday it was ready to relax some sanctions on Myanmar to recognize its fledgling democratic transition, includingaban on U.S. companies investing in or offering financial services to the country.
AP:MLK’s children mark 44th anniversary of his death
ATLANTA (AP) — Two of Martin Luther King Jr.’s children on Wednesday marked the 44th anniversary of his death by launching efforts to prevent youth violence.
Myanmar’sTurn – 101 East – Al Jazeera English
Posted on April 2, 2012 by tunaung
Myanmar'sTurn – 101 East – Al Jazeera English.